NOOCYADA BEERITAANKA UBUCDA BEERTA EE BEERTA (LIISKA LEH MAGACYADA IYO SAWIRRADA ASAASIGA GUGA) - DHUXUL
Geeska ugu wanaagsan ee guga ee bixinta iyo sifooyinka beerahooda
Ka dib marka qaboobaha iyo qaboobaha qabow, waxba waxba kor uma qaadi doonaan jinniyadaaga sida guga asaasiga ah ee u horeeya ee barafka iyo barafka horay u socodka guga. Ubaxyada hore waxay u adkaystaan ​​qabow, aan qabyo ahayn isla markaana ku dhufanayaan si dhakhso ah. Thanks to dhammaan sifooyinkaas, waxay ku fiican yihiin qurxinta qurxinta xagaaga, parks, squares, iwm Inta badan, ubax guga ugu horeeya waxaa loo isticmaalaa naqshad muuqaal ah, abuuraya qurxinta quruxda cajiib ah. Qodobkani wuxuu soo bandhigayaa waxa ugu wanaagsan ee loogu talagalay cariishyada xagaaga, iyo sidoo kale astaamaha beerahooda.
Noocyada xulashada booska for primroses ee beerta: halkaas oo si ay u beeraan asosaarro
Maadaama ay beerta beerta oo dhan ay yihiin jiilaalka u adkaysta, waxay jecel yihiin in ay koraan hooska qayb ahaan. Haddii lagu beeray dhinaca qorraxda, xagaaga marka iftiinka tooska ah uu u soo galo iyaga, caleemaha primroses ayaa qalaji doona, geedka ayaa geli doona jiilaalka aan lahayn caleemo. Sanadka soo socda, ubaxyadaasi waxay u jajaban yihiin si fudud waxayna u dhiman karaan. Ubaxyada beerta hore waxay tagaan barafka caleemaha cagaaran. Waxay si dhakhso ah u koraan, 3-4 bilood gudahood xilli kasta. Taas ka dib, waxay bilaabaan nasasho nasasho.
Ma taqaanaa? Derisyada wanaagsan waxay noqon doonaan dhirta dilaaga ah ee billowday inay soo baxaan xilliga gu'ga, iyo sidoo kale hindhis iyo dakhliga hooseeya, taas oo ubaxyada si fudud u Gagaashaan.
Cudurka qaaxada iyo qoryaha ayaa si fiican u kora ciidda bacriminta dabacsan, meel yar oo madow ah. Ka hor inta aan la tuurin, waxaa lagama maarmaan ah in lagu diyaariyo ciidda 2-3 toddobaad. Waxay u baahan tahay in la qodo, ka saar haramaha dhammaantiis, ka dibna ku dar lakab ah compost oo isku dhafan. Bacrimin badan ayaa loo isticmaali karaa halkii laga heli lahaa compost. Dhirta guga ugu horreysa waxay awoodaan inay koraan oo ku raaxaystaan ​​quruxooda qiyaastii 5-6 sano, laakiin waa in lagu beeray isla meeshii ugu horraysay ka hor 5 sano ka dib.
Beeraha gogolka geedka, isticmaalka dhirta ee naqshada muuqaalka
Midabada cirifka ah ee asaasiga ah ayaa lagu soo dhaweyn karaa marka horeba meelaha barafka weli taagan. Ciriiriga xilliga guga waa kuwo aan qabyo ahayn, waxaadna abuuri kartaa tiro aan la dabooli Karin oo la isticmaalayo ubaxyo qurxoon oo qurxoon. Iyadoo ay caawinayaan, waxaad qurxin kartaa dhirta dacha, balliyada, beeraha dhagaxyada, ama waxaad si fudud u dhisi kartaa dheriyada ama weelasha.
Geedaha xilliga guga ee cowska
Dhirta guga ugu horreysa waxaa lagu beeray labadaba dachas iyo berriga. On cawska, nalalka basal yar yar, sida proleski, muscari ama miisaanka, waxay arki doonaa aad u qurux badan.
Ma taqaanaa? The ugu qurux badan ayaa noqon doona beerto weyn, taas oo ah, nalalka beerto u dhow midba midka kale iyo tiro badan.
Markaad daryeesho caws, waxaa haboon in la xusuusto taas waxaad u baahan tahay inaad cawska ku qorto wakhti cayiman si aanay u dhaawacin ubaxa. Tani waa in la sameeyaa marka asalka primroses uu dhammeeyo wareegga sanadeedka xayawaanka dhuleed, caleemuhuna waxay u dhintaan si dabiici ah.
Waa maxay asaasiga ah in la beero agagaarka kaydka
Haddii uu jiro kaydka goobtaada oo aad rabto in aad ku beerato asxaabta u dhow, waa inaad ka fikirto waxoogaa xiiso leh. Marka aad dooranayso inaad doorbidid qoyaanka dufan-jecel - meel u dhow biyaha, waxay dareemi doonaan ugu fiican. On xuduudda isku dhafan, ubaxyo kuwan waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo leh guluubka xagaaga, iyo sidoo kale dhirta dilka ah.
Geedka waraabinta guga ee beeraha dhagaxyada iyo isku dhafka
Haddii aad rabto in aad abuurto "alfabeet" ee ku jira qaabkaaga, ka dib marka hore dhirta ubax waxay ku shaqeyn doontaa ganaax halkan, kuwan waa magacyada qaar ka mid ah:
Waxay u baahan yihiin in lagu beero kooxo, kiiskan, marka ay ubaxayaan, waxay abuuri doonaan dhibco midab leh, beertaada dhagaxuna waxay lahaan doontaa muuqaal qurux badan. Isla sidaas ayaa lagu dabaqaa iskudhafka, isku duubnaanta taas oo lagu qurxin karo asal-u-soo-saarka. Bedel ahaan, waxaad iyaga ku beeran kartaa inta u dhaxaysa dakhliga, kuwaas oo leh caleemo ornamental waaweyn. Xilliyadu waxay xannibayaan hulalka soo baxaya marka caleemaha ay ka baxaan qalajinta oo ay ku hayaan muuqaalka qurxinta ee ka kooban halbeegga.
Guga asaasiga ah ee dheryaha iyo weelasha
Ku dhowaad dhammaan primroses waxaa lagu guuleystaa gudaha gudaha. Si taas loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa dheriyada, weelasha, dheriyada, daaraha. Waxa ugu muhiimsan ee ganacsigan waa in la siiyo dhirta xaaladaha sida ugu dhow ee suurtogalka ah kuwa dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, beerashada agrotechnik ee mid ama mid kale oo caleenta ah ee dhulka ku xiran ayaa si wayn u kala duwan, sidaa darteed, arrintani waa in si gaar ah loo wajaho. Laakiin ha ka shakiyin: beerashada cufan ee qoyan waxay u muuqdaan kuwo qurux badan, gaar ahaan guga, meel kasta oo aad dhigto.
Liiska buuxa ee galka asaasiga ah
Ubaxyada guga waa noocyo badan, laakiin waxaa jira magacyada ugu caansan ee sida ugu fiican u koray aagahayaga.
Fiiriya ubaxyada dooxada
Xilliga ubaxyada ubaxyada
Chionodox (snowman, quruxda barafka)
Beerwanaag / moobiilka
Primula caadi ahaan
Trillium ayaa kacsan
Ubaxa xilliga gu'ga
Narcissus horaantii huruud
Scilla ama scilla
Violets dilka ah
Chistyak caadiga ah
Noocyada beerista ee primroses ee xagaaga xagaaga
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeray asxaabta waa deyrta, ama halkii dhammaadka Sebtembar - bilowgii Oktoobar. Waa xilligaan lagu talinayo beeritaanka, sidaa darteed dhirta dhallinyaradu waxay leeyihiin waqti si ay u qaataan xidid iyo waqti isku mid ah ma koraan si dhaxan. Beerta khibrad leh waxay ku talinayaan in la beerto digriiga iyo nalalka ee xal khafiif ah ee daloolka potassium si nus saac ka hor laga beerto.
Waa muhiim! Haddii ay jirto khatar ah in dhaawac nalalka by cayayaanka, ka hor ka hor laga beerto, haddii loo baahdo, waxaa lagu daaweeyaa kiimikada sun ah.
Nalalka waxaa lagu beeray qoto dheer oo saddex jeer ah nalka laftiisa, masaafada u dhexeysa waxaa loo hayaa seddexda dhexroor. Wixii rooting ah ee nalalka 3-4 todobaad waa ku filan. Marka dhulka la qaboojiyo wax yar iyo heerkulka joogtada ah ee hooseeya ayaa la dejiyaa, goobaha soo degida waxaa laga helayaa caleenta qalalan, peat ama straw.
Waa muhiim! Weligaa ha ku daboolin asxaabta hawada diiran, sababtoo ah waxay yeelan karaan Gagaash. Haddii ay tani dhacdo, markaa bilawga cimilada qaboobta dhirta ayaa dhiman doonta.
Sidaa darteed, si taxaddar leh u daawo cimilada: iyadoo ku xiran heerkulka, taariikhda hoyga ayaa laga yaabaa inay wareegaan. Guga, marka uu dhaxan mar dambe kuugu hanjabaan dhirta, mulchka ayaa laga saaray. Samee heer sare macquul ka hor caleemaha ugu horeysay.